Moderna Inoti Mushonga Wayo weCoronavirus Unoratidza Kubudirira
Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere che COVID-19, icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose.
Imwe kambani, Moderna, yeku Cambridge, mudunhu re Massachusetts, yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba, kana kuti ‘vaccine’, ye COVID-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa mukuedzwa kwayo.
Moderna nevakuru vezvehutano muhurumende ye America vanoti vave padano rekupedzisira rekuedza mushonga uyu.
nyanzvi mune zvehutano, Dr Frenk Guni, vanoti nguva yekupemberera mushonga uyu haisati yasvika asi vachiti mushonga uyu uri kupa tarisiro inofadza.
Hurukuro naVa Frenk Guni